नेकपामा मधेस मतभेद - Nepal Talk
काठमाडौं । नेकपाको मधेस पार्टी कमिटीमा विवाद देखिएको छ। शीर्ष नेताबीचको गुटका कारण प्रदेश २ मा पदाधिकारीमै विवाद छताछुल्ल भएको हो। पूर्वमाओवादीका प्रभु साह र मातृका यादव पक्षबीच अन्तर विरोध चुलिएको छ। दुवै जनाले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नेता मान्छन्।
मधेसमा भने उनीहरू आआफ्नो समूह बनाउन क्रियाशील छन्। पूर्वएमालेका अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष पनि मिलेका छैनन्। पार्टी एकता पछि ओली र साह एकातिर र यादव र नेपाल अर्कातिर देखिएका छन्। यही समीकरणका आधारमा नेताहरूले संगठनात्मक भागबन्डा खोजी गर्दा विवाद बढेको हो। यसले गर्दा प्रदेशका आठमध्ये तीन जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीको शपथ रोकिएको छ।
नेपाल र यादव पक्षका नेता सोमबार प्रदेश इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवलाई कारबाही माग गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकहाँ डेलिगेसन पुगेका छन्। सहइन्चार्ज नागेन्द्र चौधरी, महेन्द्र पासवान, नेताहरू रामचन्द्र झा, रामकुमार शर्मा, भरत शाह, गोपाल ठाकुर लगायत केन्द्रीय सदस्य टोलीमा थिए। वनमन्त्री समेत रहेका यादव भने नयाँदिल्ली पुगेका छन्। यादव मंगलबार फर्किएपछि उनीहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ज्ञापनपत्र दर्ता गराउने तयारी गरेका छन्।
नेकपाको २ नम्बर प्रदेश कमिटीमा एक इन्चार्ज, तीन सहइन्चार्ज र एक-एक अध्यक्ष र सचिव छन्। यीमध्ये चार नेता -इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, सहइन्चार्ज विश्वनाथ साह, अध्यक्ष प्रभु साह र सचिव सुमनराज प्याकुरेल) एका तिर छन्। दुई नेता (सहइन्चार्जहरू नागेन्द्रप्रसाद चौधरी र महेन्द्र पासवान) अर्का तिर छन्। इन्चार्ज मण्डल र सचिव प्याकुरेल ओली पक्षका नेता हुन् भने सहइन्चार्ज चौधरी नेपाल पक्षका।
भदौ २४ गते बर्दिबासमा ओली-साह समूह एकातिर र नेपाल-यादव समूह अर्का तिर भएपछि झडप भएको थियो। त्यसपछि चार नेताको बैठकले नेपाल सहितका नेतालाई कारबाही गर्नु पर्ने माग गरेको छ। बर्दिबास घटना नेपाल र यादवको निर्देशनमा भएको निष्कर्ष बैठक निकालेको थियो। नेताद्वयलाई आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। सहइन्चार्ज पासवानलाई केन्द्रीय समिति, गंगा पासवान र फुल्गेन नायकलाई प्रदेश कमिटी र पूर्वमन्त्री उमेश यादवलाई साधारण सदस्यबाट हटाउनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ।
प्रदेश इन्चार्ज मण्डलले नेताहरूलाई थप्पड हान्न खोज्ने, गालीगलौजमा उत्रनेलाई कारबाही नगर्ने हो भने पार्टी नचल्ने बताए। ‘सचिवालयले हाम्रो प्रदेशमा दुई सहइन्चार्ज थप्ने निर्णय ग¥यो। थपिएका नेताहरूले मसँग आएर सल्लाह गर्नु भएको छैन। हामीलाई के जिम्मेवारी दिनुहुन्छ भनेर आउनु भएको पनि छैन। बैठक बोलाउन खोज्दा उहाँहरूलाई फोन गरेको थिएँ तर आउनु भएन’, उनले भने, ‘तर, उहाँहरू यहाँ आएर पदबहाली गर्नु भन्दा आठै जिल्लामा आफू निकट नेताहरूको मिटिङ गरेर काठमाडौं जानु भयो।’
सहइन्चार्ज नागेन्द्र चौधरीले भने प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी विधान अनुसार चल्न नखोजे आरोप लगाए। ‘अन्तरिम विधानबमोजिम प्रदेश कमिटीले आफूमध्येबाट एकतिहाइ नबढाई सचिवालय बनाउने, नौजनाको कार्यालय बनाउने व्यवस्था छ। कार्यालय गठन भएको छैन। सचिवालय बनेको छैन। कसले के निर्णय गर्छन् ? त्यसको आधिकारिकता के ? ’ उनले भने, ‘ प्रदेशका अध्यक्ष र सचिवले गर्ने निर्णय पार्टीको हुन्छ ? जसलाई मन लाग्यो उसलाई कारबाही गर्ने हो र ? ’
दाहालको भूमिका ओली र नेपाल दुवै तिर सन्तुलनकारी देखिन्छ। ‘प्रचण्डले मातृका र प्रभुलाई बोलाएर विवाद मिलाउने हो भने मधेसको समस्याले एक प्रकारको समाधान पाउँछ’, नेकपाका एक नेताले भने। सोमबार डेलिगेसन आएका नेतालाई दाहालले सचिवालय बैठकबाट विवादको हल खोज्ने बताएर फर्काएका थिए। ‘मधेसको पार्टी कमिटीमा समस्यै देखियो। आरोप-प्रत्यारोपले कहीं पुगिन्न’, उनले भनेका थिए, ‘दुवै पक्ष बसेर समाधान खोज्नुपर्छ। सचिवालयले पनि अब निर्णय लिन्छ।’
प्रदेशमा जिल्लापिच्छे फरक समीकरण छ नेकपामा। तत्कालीन एमाले भित्र ओली पक्षबाट सत्यनारायण मण्डल र नेपाल पक्षका नागेन्द्र चौधरीबीच विवाद छ, माओवादीभित्र मातृका र प्रभुबीच। यस बाहेक पनि नेताहरूका आ-आफ्नै गुटगत विवाद छ। धनुषामा रघुवीर महासेठ विरुद्ध श्रीप्रसाद साह, योगनारायण यादव र शत्रुधन महतो एका तिर छन्। यसमा महतो मात्र नेपाल पक्षका हुन्। यस अघि नमिलेका रामचन्द्र झा र मातृका यादव पनि जिल्लामा एकै ठाउँ आइ पुगेका छन्।
सिरहामा पूर्वमाओवादी भित्र विश्वनाथ साह र महेन्द्र पासवान मिल्दैनन्। अजयशंकर नायक, राामकुमार यादव र लीला श्रेष्ठ एका तिर छन। सिरहामै ओली समूहका धर्मनाथप्रसाद शाह र लीला श्रेष्ठको फरक गुट छ। नेपाल समूहका रामचन्द्र यादवको अर्को गुट छ। बारामा अच्युत मैनाली एका तिर, पुरुषोत्तम पौडेल र गोपाल ठाकुर अर्का तिर छन्। रौतहटमा प्रभु साह एका तिर र सत्यनारायण मण्डल, अशोक जैसवाल अर्का तिर छन्। सप्तरीमा सत्यनारायण मण्डल र सुमनराज प्याकुरेल एका तिर, गोविन्द न्यौपाने अर्कातिर छन्।
प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो जिल्लाको हकमा विवाद मिलाएका छन्। अन्यत्र भने उनीहरूले किचलो झिकि रहेका छन्। नेपाल पक्षका प्रदेश सहइन्चार्ज नागेन्द्र चौधरीको गृहजिल्ला पर्सामा जिल्ला कमिटीको शपथ भइ सकेको छ। उनले अन्य जिल्लाको शपथमा विवाद झिकि रहेको ओली पक्षको आरोप छ।
बारामा नेपाल पक्षका पुरुषोत्तम पौडेल र मातृका निकट गोपाल ठाकुरले जिल्लाको शपथ सकाएका छन्। उनीहरूको ध्यान पनि अन्य जिल्लाको शपथग्रहण तिर देखिएको छ। ‘उहाँहरू आफ्नोमा मिलाएर अन्य नेताको जिल्ला तिर भड्काउन लागेको देखिन्छ’, ओली पक्षका एक नेताले भने।
नेपाल निकट सहइन्चार्ज चौधरीले गृहजिल्लाको शपथग्रहण पनि त्रुटिपूर्ण रहेको आवाज आफूले उठाइ रहेको बताए। ‘पर्साको पनि त्रुटिपूर्ण छ। उजुरी केन्द्रमा परेको थियो। केन्द्रले सच्याएर शपथ गराउन निर्देशन दिए पनि प्रदेशले सच्याएको छैन। केन्द्रले दबाब नदिएकाले पर्साको शपथ सकिएको हो’, उनले भने, ‘आफ्नोमा मिलाउने अन्यत्र भाँड्ने भन्ने आरोप मात्र हो।’